Ny fitaovana tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka Woocommerce | Martech Zone
Woocommerce no malaza indrindra ary azo lazaina ho iray amin'ireo plugins eCommerce tsara indrindra ho an'ny WordPress. Izy io dia plugin maimaim-poana izay tsotra sy mahitsy hapetraka sy ampiasaina. Tsy isalasalana fa ny fomba tsara indrindra hampiodina ny anao WordPress tranokala ho fivarotana e-varotra miasa tanteraka!
Na izany aza, hahazoana sy hitazonana ny mpanjifa dia mila mihoatra ny fivarotana eCommerce matanjaka ianao. Mila matanjaka ianao paikady marketing marketing amin'ny toerana hitazomana ny mpanjifa ary hamadika azy ireo ho mpividy miverimberina. Fa inona marina ny marketing amin'ny mailaka?
Ny marketing amin'ny mailaka dia manondro ny hetsika fanatonana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny mailaka. Ny mailaka dia mbola manana ROI tsara indrindra amin'ny fantsona marketing rehetra. Raha ny tena izy, Ny Fikambanana Direct Marketing mitatitra fa ny mailaka ROI marketing dia $ 43 isaky ny dolara laniana, ka io no fantsona mahomby indrindra amin'ny familiana ny varotra.
Ny marketing amin'ny mailaka dia ampiasaina amin'ny ecommerce:
Diniho ny mpanjifanao
Karakarao ny mpanjifa izay mbola tsy vonona ny hividy
Amidio amin'ireo mpanjifa izay vonona hividy.
Mampiroborobo ny vokatra ataon'ny olon-kafa (ohatra marketing marketing)
Mitondrà fifamoivoizana mankany amin'ny bilaogy / bilaogy vaovao
Maninona Woocommerce no sehatra eCommerce ambony:
Woocommerce azo ampiasaina hivarotra zavatra rehetra
Sehatra azo antoka sy azo antoka
Ny karazana plugins azo isafidianana
Haingana & mora apetraka
Mba hanampiana anao hamorona tetikady marketing mailaka tsara indrindra, hizara ireo fitaovana marketing mailaka dimy voalohany izahay; mila mandeha ny marketing amin'ny mailakao ianao. Andao àry hanomboka!
Fitaovana 5 tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka Woocommerce
Ity dia fitaovana iray hampifandraisana ny tranokalanao amin'ny Mailchimp, iray amin'ireo serivisy mailaka malaza indrindra misy. Ity fitaovana ity dia ahafahanao manangana endrika, mijery analytics, ary maro hafa. Mailchimp dia manolotra ny mpivarotra e-varotra fitaovana ilaina hanampiana amin'ny fivarotana varotra. Izy io koa dia ahafahanao mampifandray ny mpanjifanao sy manafatra ny angon-drakitra mba hampandeha automatique ireo asa sy handefa fanentanana kendrena. Ny ampahany tsara indrindra? Maimaimpoana tanteraka! Key endri-javatra:
Mamorona endrika fisoratana anarana manokana ary ampio amin'ny tranokalanao WordPress
Midira amin'ny plugins amin'ny endrika mpamorona endrika sy e-varotra
Jereo ny tatitra amin'ny antsipiriany momba ny fampielezan-kevitrao
Mandefasa fampandrenesana mandeha ho azy rehefa misoratra anarana ny mpamandrika vaovao
Midira ho an'ny Mailchimp
Jilt dia sehatra marketing amin'ny mailaka rehetra natao ho an'ny filan'ny fivarotana WooCommerce. Noho ny fanampian'ity sehatra ity dia afaka mandefa taratasim-baovao ianao, fanambarana momba ny varotra, mailaka fanaraha-maso mandeha ho azy, tapakila, fampandrenesana ary maro hafa! Azonao atao ny mifantoka amin'ny automatisation, segmentation, ary mailaka transactional, rehetra nefa tsy mahafoy ny kalitaon'ny famolavolana. Ny endri-javatra lehibe dia ahitana:
Manana fampidirana WooCommerce.
Mandefasa fanambarana momba ny varotra
Manampia fivarotana an-tsokosoko sy fampiakarana amin'ny mailaka.
Fizarana miorina amin'ny fividianana taloha amin'ny alàlan'ny motera fizarana mandroso
Avereno ny vola azo amin'ny alàlan'ny mailaka sarety nilaozana.
Métrika fampisehoana antsipirihany isaky ny mailaka
Mpamorona mailaka mahavariana, miaraka amin'ireo modely drag-and-drop
Atombohy ny fitsapana anao
Follow-Ups dia fitaovana iray hanampy anao hirotsaka tsara kokoa amin'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny famoronana fampielezan-kevitra mitete be pitsiny mifototra amin'ny tombontsoan'ny mpampiasa, ary mividy tantaram-pitaterana hitarika varotra sy fifampiraharahana ambony kokoa, izay tsy misy ezaka firy amin'ny fantsona marketing maro. Key endri-javatra ahitana:
Ampitomboy amin'ny fanentanana ny fanaraha-maso
Araho ny sandan'ny mpanjifa
Mandefasa tweet ho anao prospect
Fanadihadiana amin'ny antsipiriany- (misokatra / tsindrio / mandefa / sns)
Mamorona sy tantano ny lisitry ny mailaka
Modely maimaimpoana sy mahazatra
Fampidirana Google analytics
Sintomy ny Plugin fanaraha-maso
Moosend dia iray amin'ireo sehatra ara-barotra mailaka matanjaka indrindra sy sehatra automation ara-barotra izay hanampy anao hanamafisana sy hanamafisana ny fampielezan-kevitra momba ny varotra mailaka eCommerce. Ny famolavolana intuitive sy ny curve fianarana kely dia ahafahan'ny mpampiasa manomboka manomboka, raha toa kosa ny tonian-dahatsoratry ny mailaka Drag-and-Drop sy ny môdely mailaka azo zahana tanteraka dia mampanantena fa hampitombo ny ezaka ataonao.
Ny tena mampiavaka dia:
Tonian-dahatsoratra mailaka Drag-and-Drop matanjaka
Tranomboky môdely mailaka be dia be
Segmentation sy laser-kendrena personalization safidy
Recipe automatique efa vita, azo zahana tanteraka
Pejy fipetrahana sy endrika famandrihana
Fanadihadihana amin'ny vanim-potoana marina
Fampidirana 100+ azo isafidianana
Mahazoa Moosend maimaimpoana
Omnisend no fitaovana tsara indrindra amin'ny famolavolana ny mailaka eCommerce mandeha ho azy sy manual. Izy io dia mikendry ny hanampy ireo orinasa eCommerce hampifandray ny marketing amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra manokana ho an'ny olona mety, amin'ny fotoana mety, amin'ny alàlan'ny fantsona mety. Ny fisarihana drag-and-drop dia manaparitaka ny vokatrao ary mamela anao hametraka ny mombamomba ny vokatra ao amin'ny taratasinao sy ny fanentanana mandeha ho azy. Ny endri-javatra lehibe dia ahitana:
Manana fampidirana WooCommerce izy io.
Ampidiro ao anaty fampifangaroana marketing anao ny SMS, ny fampandrenesana fanesorana tranonkala, Facebook Messenger, ary maro hafa
Alefaso ny hafatra marina mankany amin'ny mpanjifa mety amin'ny fotoana mety, isaky ny mampiasa automation.
Mamorona fizarana miovaova arakaraka ny masonao
Azonao atao ny mampifandray ireo fifandraisana avy amin'ny angona WordPress.
Mamorona pejy fidirana sy popup mora foana.
Araho ny fahombiazan'ny varotra amin'ny alàlan'ny fantsona samihafa
Atombohy ny fitsapana ny Omnisend anao
Mailpoet dia fitaovana azo ovaina indrindra miaraka amin'ny kinova maimaim-poana sy maimaim-poana. Izy io dia tranokala marketing amin'ny mailaka WordPress mpisava lalana izay mamela anao hanao ny zava-drehetra tsara avy amin'ny dashboard WordPress. MailPoet dia milaza fa mandefa mailaka tsara tarehy izay mahatratra boaty inbox isaky ny avy ary mamorona mpamandrika tsy mivadika. Natao ho an'ny tompona tranonkala be atao ny sehatra, manampy azy ireo hanomboka afaka minitra vitsy. Ny endri-javatra lehibe dia ahitana:
MailPoet dia manana plugin WordPress mivantana.
Azonao atao ny mamorona endrika fisoratana anarana ary apetaho amin'izay tianao amin'ny tranokalanao.
Manamboara mailaka na avy am-boalohany na amin'ny fampiasana modely isan-karazany
Mametraha lisitry ny mpamandrika isan-karazany, ary tantano ao anaty WordPress izy ireo
Mandefasa fampandrenesana fisoratana anarana mandeha ho azy sy mailaka tongasoa.
Midira ho an'ny MailPoet
Miaraka amin'ny fitaovana marketing sy plugins mailaka mety, dia afaka mitantana mora foana ny lafiny rehetra amin'ny marketing amin'ny mailaka ianao manomboka amin'ny fananganana endrika fisoratana anarana, famoronana mailaka, fitantanana lisitra, fanaraha-maso analytics ary maro hafa - avy ao amin'ny tranokalanao WordPress. Tsy mora velively ny famoronana sy fitantanana mailaka mandeha ho azy, noho ireo fitaovana voalaza etsy ambony. Tsapao ny fitaovana, jereo ny fiasa sy ny drafitra vidiny alohan'ny hisafidianana ny fitaovana mety aminao.
Soso-kevitra ny hanana ekipa manam-pahaizana WordPress avy amin'ny maso ivoho azo itokisana toa anao Uplers iza no mahatakatra ny fahasarotan'ny orinasa an-tserasera. Izy ireo dia afaka manampy anao amin'ny fananganana fivarotana eCommerce anao ary koa manampy anao hampifangaro ireo plugins marketing amin'ny mailaka ilaina rehetra.
Fampahafantarana: Mampiasa rohy mpiara-miasa izahay ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: fikambanam-barotra mivantanaecommercemailaka ecommercesehatra ecommercefampidirana mailakamailaka Marketingmailaka roifanaraha-dehibemailaka isan'ny jodymailchimpMailPoetomnisendwoocommerce
Ahoana sy ny antony hisoratana anarana adiresy mailaka fizarana ho an'ny kaonty Google orinasa